Somaali-diidkii oo leh, "Hoheey Buuraha hargaga , nin duulahayeey dabraan"
Waxaa mashaqo ku ah reerkii iskood dawladnimda sheegtay in 14kii sanadood ee tagtay lagu maaweelinayey in la aqoonsan doono, mar ay yiraahdaan dhanka Itoobiya ayey ka iman iyo mar ay wakhtiga ku dhunshaan mayee waa Jabuuti ama markan waaba Britsihka.Waxaasna, waxaa faafinayey saxaafad ku sheegggga marqaansan ee ku faanta , "Dee shabakadeennu wax reerkeenna ka dhan ah maba qorto iyadoo xor ah". Illaa iyo maantana kama waantoobin in qabiilkooda ay runta u sheegaan oo ay yiraahdaan:
1.Britishkii, Itoobiyaankii iyo Jabuutiba weey na diideen ee ha laga tashado.
2.In 14kii sanoo tegay maamul la yiraahdo S/land in uusan ka jirin Sool , Sanaag iyo Cayn.
3.In sida uu sheegay Qaybe ay dhabtu tahay ,shacabkuna uu maamulka Pl oo horay u dhisteen ay
keensadeen.Sidaas darteedna,wakiiladii uu qaybe sida uu sheegay suuqa ka soo qabtay ee Cigaal
ka geeriyooday ee iska yuurura ayan metelin.
4.In ay shacabkooda u sheegaan in haraagii Siyaad uu maanta xukumo ee dantoodu ay tahay in
in meesha ay xoolo ka tabcadaan inta goori goor tahay.
Iyagoo dadkiiba runta ka dhowray ayey waxay faafiyeen maweelintii Riyaale iyo riyadii reerka SNM ee labaduba dhabta ka fog ee aheyd xuduudda ayaanu tageeynaa.
Waxaase xusuusin mudan labo sandood ku dhowaad ay Somaali-diidku ay ku qeylinayeen oo mararka qaarkoodna ay kuba dhaaranayeen sida Shekh Madarkii geeriyooday oo yiri, "Wallee in aan Garoowe galayo". Runtuse waxay tahay in Shekha karamadii iska xayuubiyey uu geeriyooday iyadoo ciidamadii ay waa hore lahaayeen way ruqaansadeen oo ku jira gaaf wareeg joogta ah iyo xishood.
Wixii oo marka hore sameyn kari waayeen ayey maanta oo dad badani isakga soo carareen, Cabdullahina uu yahay Madawenaha Guud ayey waxay isku soo miqiiqeen Jiidda hore ee Sool , wixii ka raacayna waaba la ogaa.
Maanta Riyaale waxay ishayaan Maxamed Xaashi oo looga fadhiyo in Iidoorka doolka ah uu dibedda ka dhigo Pl, una soo celiyo dhulka wali uga maqan Sanaag oo aan rajeeynayo in uu ku dhaqaaqi doono hadduu Eebe idmo.
Gabogabadiina,Somaali-diidka rabi ka furtay ee gaaladii dhimatay ku xusa Waqooyiga, ka daawo Radio-Laascaanood maxaabiistoodii sawiradii laga soo qaaday ee tirada badan ee aan ku jirin kuwoodii tirada badnaa ee laga laayey .Waxaad kaloo ka dhegeysan kartaa wareeysigooda oo maqal ah Radio-laaascanood oo labo website kala ah iyo Widhwidh.com oo aad ka arkeeyso sida aadaminimada leh ee loo daweeynayo dhawicii Iidoorka ee yaalla Isbitaalka Laascanood oo ay booqanayaan saraakiil ka tirsan Puntland,
Waxaase, nasiibdarro ah in wax ma garatda Somalilandnet ay garan waayeen ixtiraamka Somaalida ka dhexeeysa iyo xushmada bisha barakeeysan ee Ramadaan oo soo bandhigay meydhkii labo nin oo ay dileen .Marka xumaantaas aad eegtana , waxaad ka garaneeysaa in kuwa guusha ku doontay sawirka meydka dad muslim ah oo midkoodna uuba ka tirsanaan jiray ciidanka maamulkaas, labadana u dhasheen Sool in haddii kuwo kalena ay jiraana ay iyagoo qaawan ay soo sawiri lahaayen. Waxaana talo iga ah in aanan lagu dayan kuwa ku tuntay dhaqankii, diintii iyo Somaalinimadii, arrimahaas uu Illaahay jab ku badi doono , aakhirana lagula xisaabtami doono iyagoo carabka laalaadinaya oo leh " Hoheey Buuraha Hargagaa , Nin duulahayey dabraan"....